सत्ताको सिनु | वासुदेव गुरागाईं
कथा वासुदेव गुरागाईं November 13, 2011, 3:07 am
विश्व ब्रह्माण्डको कुनै एक कुनामा एउटा सानो देश थियो । सानो भईकन पनि त्यस देशमा उपलब्ध नहुने चिजवस्तु केही थिएन । सबै किसिमको भौगोलिक उपलब्धता रहेको त्यस देशमा प्रचुर मात्रामा नदीनाला र वनजङ्गल पनि थियो । हराभरा डाँडापाखा, हिउँदबर्षा हरबखत कलकल सङ्गीत भरेर नाच्दै दौडिरहने नदीनाला, स्थिर आसनमा रमाएका सेता हिमाल र अन्य कतिपय मनोरम वातावरणले त्यस देशको सुयश विश्वका अन्य कुनाकाप्चामा पनि पैmलिएको थियो । सधैँको हराभरा भूमि, चिसो पानी र प्रिय वातावरणले त्यहाँका सबै प्राणी मुग्ध थिए । रमाइरमाइ आ–आफ्ना गुजारा चलाइरहेका थिए ।
एकाएक त्यस देशमा अन्य प्राणीका तुलनामा स्यालको सङ्ख्यामा निकै बृद्धि हुन थाल्यो । मान्छेहरु जङ्गल त के गाउँका बस्ती र सहरमा समेत हिँडडुल गर्न डराउन थाले । ‘के दिन के रात, के बिहान के साँझ’ स्यालहरुको हुइँया मान्छेका बस्तीबस्तीमा घन्कन थाल्यो । स्यालहरु मान्छेका अधीनमा बस्न पटक्कै रुचाउँदैनथे । तिनलाई अनुशासनमा राखी ठेगान लगाउन सक्ने अरु ठूल्ठूला पशुहरु पनि त्यतिखेर त्यहाँ थिएनन् । न त तिनलाई बलियोसँग बाँध्न सक्ने कागजी दाम्लो नै त्यहाँ बाट्न भ्याइएको थियो । त्यसैले पनि स्यालका खुट्टा भुइँमा थिएनन् । मिठोमिठो आहाराका लागि तिनीहरु यत्र–तत्र–सर्वत्र जहाँ पायो त्यहाँ दौडिन थाले । जसले जे लुछ्न सक्छ त्यही लुछ्न थाले । ठूला स्यालले ठूला भाग र साना स्यालले सानै भाग लुछ्न थाले । लुछ्नु तिनको संस्कृति बत्र पुग्यो ।
यसरी एकाएक स्यालको बिगबिगी बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका लागि बस्तीका मान्छेहरु आपसी सरसल्लाहमा जुटे । स्याललाई निर्मुल नै गर्ने सोच कसैको थिएन । केवल तिनको स्वभावसँग मात्र बस्तीका मान्छे आजित भएका थिए । स्यालको बिगबिगीबाट मान्छेका बस्ती कसरी जोगाउने भत्रे चिन्ताका विषयमा मात्र तिनीहरुका बीच छलफल हुन थाल्यो । कसैले के भने कसैले के । विचारमा मतैक्यता भएन । तैपनि तिनको अभियानमा कुनै विचलन आएन । छलफललाई निरन्तरता दिँदै गए । ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’ भनेभैmँ पछि गएर यस प्रयासले केही सकारात्मक विन्दु फेला पा¥यो ।
गाउँबस्ती र सहरमा जहीँतहीँ दुःख दिने ती स्यालहरु सबै एकैनासका थिएनन् । कोही झालेमाले, कोही ध्वाँसे । कोही घोर्ले, कोही सिँगारे । कोही राता, कोही पहेँला । कोही आफ्नै बस्तीमा जन्मेहुर्केका, कोही रातसाँझ अन्यत्रबाट प्रवेश गरेका । बसाइस्थान अनुसार कसैको कस्तो, कसैको कस्तो रुप । हावापानी, भौगोलिक वातावरण र तिनको वंशजका आधारमा कराइ पनि कसैको कस्तो, कसैको कस्तो । सबैतिर विविधता । पत्याउनै पनि गाह्रो ।
जातिगत रुपमा सबै स्याल भए पनि यिनै विविधताले गर्दा तिनीहरुका बीच पनि पर्याप्त मनमुटाव थियो । मान्छेका अगाडि जातिगत हिसाबले कहिलेकाहीँ एक भएजस्ता देखिए पनि तिनीहरुबीच भित्रभित्र आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र विश्वास पटक्कै थिएन । सबै आ–आफ्ना स्वादअनुसारको सिकारका लागि दौडिन्थे । लड्थे । स्यालका यस्ता गुह्य कुरा र व्यवहारसँग बस्तीका सबै मान्छे जानकार थिए ।
हुन त त्यस बस्तीका मान्छेको पुर्पुरो पनि त्यस्तै थियो । स्यालको बिगबिगी सुरु हुनु अघि त्यस बस्तीमा एउटा डरलाग्दो सिंहको जगजगी थियो । सिंहको त्यो जगजगी स्यालहरुको विद्यमान बिगबिगीभन्दा निकै चर्को थियो । असह्य थियो । सङ्ख्याका हिसाबले स्यालभन्दा कैयन् गुणा कम भए पनि सिंह र यसका डमरुसँग बस्तीका मान्छेहरु बढी प्रताडित थिए । बढी थिचोमिचोमा जकडिएका थिए । बढी डराउँथे । अरु त के बोल्नसम्म पनि निकै होस पु¥याउनु पथ्र्यो । बस्तीभित्र बोलेका कुनै पनि कुरा कुनै न कुनै प्राणीले सिंह कहाँ पु¥याउँथ्यो । निश्चित रुपमा त्यसको परिणाम निकै पीडादायी हुन्थ्यो । यसरी अति भएपछि बस्तीका मान्छेले सिंहको अस्तित्व नै लोप हुने गरी तिनलाई बस्तीबाट हटाएका थिए ।
सिंहको जगजगीको ताजा सम्झना मनमा पालेका बस्तीका मान्छेहरु स्यालप्रति बढी नै सद्भाव राख्थे । आदर गर्थे । यिनै आस्थाका कारण चिथोराचिथोर नै भए पनि बस्तीका मान्छेहरु ती स्यालहरुसँग बोल्न कराउन कत्ति डराउँदैनथे । हाकाहाकी मुख खोल्थे । चित्त नबुझेका कुरामा दोहोरी चल्थ्यो । यस्तै कराइ र दोहोरीका कारण कहिलेकाहीँ बस्तीका एकाध मान्छेहरु अचानक अलप पनि हुन्थे । भेटिँदैनथे । ती कसरी कहाँ अलप हुन्थे बाँकी मान्छेले पत्तै पाउँदैनथे । अलप भएका व्यक्तिको खोजतलासमै कतिको जीवन नै बरबाद हुन पुग्थ्यो । तर स्यालहरुलाई मान्छेको त्यस्तो सास्ती र त्यस किसिमका अप्रिय घटनाप्रति कुनै किसिमको चासो हुँदैनथ्यो । पीडा हुँदैनथ्यो । उनीहरु आफ्नै धुनमा मस्त भएर नाचिरहन्थे ।
गाउँबस्तीका मान्छेले गाईबाख्रा र तिनको आचरण तथा व्यवहारलाई नजिकबाट नियालेर त्यसबाट प्राप्त ज्ञानका आधारमा स्याल धपाउने उपायको सूत्र निकाले । गाईबाख्रा हरियो घाँसमा रमाएजस्तै स्यालहरु पक्कै सिनुमा रमाउँछन् भत्रे अनुमानका नजिक तिनीहरु पुगे । जसरी गाईबाख्रा हरियो घाँस अघिअघि देखेपछि त्यसैका पछिपछि दौडन्छन्, त्यसरी नै अघिअघि सिनु देखाएपछि स्यालहरु पनि दौडन्छन् भत्रे निष्कर्षमा उनीहरु पुगे । निष्कर्ष निकाल्ने काम मात्र होइन, त्यस उपायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सामूहिक अठोट पनि तिनले गरे ।
सबै प्राणीको बस्ती भएका ठाउँमा स्यालहरु हुनु कुनै अनौठो कुरा थिएन । यी सबै स्यालको एउटै स्वभाव हुन्छ भत्रे पनि थिएन । खासमा दुःख दिने स्यालहरु शक्तिसम्पत्र ठूल्ठूला जम्बु स्याल थिए । ती ठूल्ठूला जम्बु स्याललाई मात्र पाखा लगाउँदा पनि गाउँबस्ती शान्त हुन सक्थ्यो । समाजमा अमनचयन कायम हुन सक्थ्यो । त्यसैले बस्तीका मान्छेले तिनलाई छानीछानी एकीकृत गर्ने योजना बुने । योजना अनुसार तिनले कुनै न कुनै निहुँ बनाएर दुःख दिने त्यस्ता जम्बु स्यालहरुलाई छान्दै गए । यी मध्ये पनि कम प्रताडकलाई गाउँमै अरुको ठालु बनाएर राखे । तीभन्दा अलि बढी प्रताडकलाई इलाका, क्षेत्र आदिमा लगेर थन्क्याए । ती भन्दा अझ बढी प्रताडकलाई जिल्लामा लगेर थुपारे ।
सिनु अघिअघि देखाइन थाल्यो । कसैले वारिबाट देखाए, कसैले पारिबाट । स्यालहरु पछिपछि दौडन थाले । गाउँ, इलाका, क्षेत्र र जिल्लामा अल्मल्याइएका स्यालका लागि पनि तिनको शक्तिअनुसार सिनुका स–साना अंश फालिए । तिनीहरु आ–आफ्नो औकातअनुसार त्यसैमा अल्मलिए । अन्त्यमा सिनुको ठूलो र अति आकर्षक हिस्सा देशको मुख्य केन्द्रमा पु¥याएर राखियो । त्यस्तो रहरलाग्दो सिनु देखेर त्यहाँ पुगेका सबैभन्दा छट्टू जम्बु स्यालहरु रमाएर नाच्न थाले । सिनुका बरिपरि झुम्मिएर लुछाचुँडी गर्न थाले । सिनुको उपलब्धताले तिनीहरु औधि रमाए । यसपछि आफ्नो पुख्र्यौली थलो पनि तिनले बिर्सन थाले । बेलाबेलामा अरुले सम्झाइदिएपछि उल्टै ‘ए ! हो र ?’ भत्रे प्रश्न गर्न थाले ।
गाउँबस्तीका मान्छेद्वारा छानिएका ती जम्बु स्यालहरु समयान्तरमा यति मोटाए, यति शक्तिशाली भए कि एकले अर्कालाई सिनुमाथिको प्रवेश निषेध गर्न थाले । गाउँबस्ती त शान्त भयो, तर सबैको आँखा पर्ने देशको मुख्य भाग नै दिनानुदिन हुने सिनुको लुछाचुँडीले दुर्गन्धित हुन पुग्यो । आपैmँ सिनु खोज्ने काम त परै जावस् बस्तीका मान्छेले उपलब्ध गराएको सिनुको उपभोग समेत तिनले राम्रोसँग गर्न सकेनन् ।
एकातिर स्यालहरु सके आपैmँ र नसके अरुसँग मिलेर भए पनि सिनुमाथि आफ्नो कब्जा जमाउन चाहन्थे । अर्कातिर गाउँबस्तीका सर्वसाधारण बासिन्दा यसरी स्यालको बिगबिगी देशको मुख्य भागमा केन्द्रित गराउन सक्ने त्यस्तो सिनु केको रहेछ ? भनेर जात्र चाहन्थे । यस कुराको रहस्य बस्तीका केही टाठाबाठा बाहेक अरुलाई थाहा थिएन । प्रश्न उठेपछि स्वाभाविक रुपमा छलफल सुरु भयो । सिनुका विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने कि नदिने ? भत्रे विषयमा निकै चर्काचर्की बहस पनि भयो ।
बहस यत्रतत्र सर्वत्र चर्कियो । यसले लामो समय लियो । अन्त्यमा तिनै सर्वसाधारणको सहयोगले स्यालहरुलाई गाउँबाट लखेट्न सकियो भने फेरि यिनैलाई त्यस्तो अनौठो सिनुका विषयमा जानकारी दिन किन नहुने ? भत्रे कुरामा सबै एकमत भए । छलफलका सहभागीबीच जब यस्तो मतैक्यता भयो तब एउटा चर्को स्वर भएको व्यक्तिले सबैभन्दा अग्लो डाँडामा गएर सबैले सुत्रे गरी करायो,— ‘हामीले स्याललाई गाउँबाट सहरसम्म डो¥याउन देखाइएको त्यो सिनु ‘सत्ता’ को थियो ।’
यो जानकारीपछि बस्तीका मान्छेहरु छक्क परे । यस किसिमको अनौठो सिनुका विषयमा उनीहरुले यसअघि कहिल्यै सुनेका थिएनन् । यति सुनिसकेपछि प्रत्येक बस्तीका मान्छेहरु आ–आफ्ना नजिकका अग्लाअग्ला डाँडामा उक्ले । सिनु लुछाचुँडीका लागि भइरहेको त्यो घिनलाग्दो रमितामय दृश्य अघाउन्जेल हेरिरहे । डाँडामा उभिएर पनि नदेख्नेहरुले अर्काका काँधमा चढेर भए पनि त्यो दृश्य हेरिछाडे ।
सिनु लुछाचुँडीको प्रयत्नमा संलग्न स्यालहरुलाई भने त्यसको कुनै परवाह थिएन । उनीहरु सत्ताको त्यो अनौठो तर स्वादिलो सिनु लुछ्ने योजनामा अभैm तँछाड–मछाड गरेर घम्साघम्सी गरिरहेका देखिन्थे । यता गाउँबस्तीका मान्छेहरु भने त्यस्ता जम्बु स्यालहरुलाई सत्ताको सिनुमा अल्मल्याएर आपूmहरु ढुक्कसँग गाउँबस्तीमा रहनबस्न पाएकोमा मनमनै हर्षित थिए । तर ‘धेरै भएपछि चिनी पनि तीतो हुन्छ’ भनेभैmँ स्यालहरुको सधैँको त्यो कल्याङकुलुङले उनीहरुको निन्द्रा र सपना देखाइमा भने हुनसम्म आघात पुगिरहेको थियो ।